Gbasara Anyị | Xingtai Xinchi Rubber Ma Plastic Product Co., Ltd.
Nabata na Xingtai Xinchi
Xingtai Xinchi Rubber Ma Plastic Product Co., Ltd. emi odude ke Hebei n'ógbè, ọ fọrọ nke nta Beijing. Transportationgbọ njem ahụ dị ezigbo mma. Xingtai Xinchi ODM na OEM nke ipuiche amị nile di iche iche nke gaskets dị iche iche ihe dị ka metal, roba, eriri mejupụtara na na, nke kwesịrị ekwesị nke akara nke mmanụ ụgbọala, dizel na mmiri maka ụgbọala, na-ewu igwe, generator na na. Na ahụmahụ nke ihe karịrị afọ 20. Xingtai Xinchi enwetawo ezigbo aha zuru ụwa ọnụ site na nkà na ụzụ kachasị mma na àgwà raara onwe ya nye.
Companylọ ọrụ anyị nwere 4000 mita anọ, nke eji akụrụngwa roba na-arụ ọrụ, igwe ọkpọ, NBR FKM akàrà na akụrụngwa ndị ọzọ dị elu. Kwa Afọ mmepụta nile di iche iche nke akàrà ngwaahịa 1 nde, Ngwaahịa rere gburugburu world.Our azụmahịa echiche bụ "Ime ihe n'eziokwu na Trustworthiness, Preferential Prices and Customer First", nke ahụ bụ ihe mere anyị ji merie Domestic na ndị mba ọzọ ndị ahịa 'ntụkwasị obi!
Echiche ụlọ ọrụ
Mee mmepe site na ugwu, mma nweta ntụkwasị obi.
Practicaldị n'otu, ịsụ ụzọ na ihe ọhụrụ.
Mepụta ohere maka ndị ọrụ ịmepụta uru maka ndị ahịa, yana akụ na ụba maka ọha mmadụ.
Ndị mmadụ gbadoro ụkwụ njikwa, ụkpụrụ omume ka enterprise, adigide mmepe.
Onye ahịa buru ụzọ, were obi ya niile rụọ ọrụ.
Iche echiche bụ mkpebi, ebumnuche ga-eme n'ọdịnihu, nkọwa zuru oke na-ekpebi ihe ịga nke ọma, na agwa na-ekpebi ihe niile.
Main ngwaahịa na-agụnye zuru engine gasket idozi kit, cylinder isi gasket, valvụ cover gasket, sịlịkọn fluorine roba akàrà, iche iche iche iche iyuzucha gasket, mmanụ pan gasket, iche iche iche iche ụgbọala ụgbọala bompa, axle ụlọ, o mgbanaka kit igbe na ndị ọzọ. Anyị nwere obi anụrị ma dịkwa njikere ịzụlite ngwa ọhụụ ọ bụla maka gị. Iji hụ na ị bụ ngwaahịa kachasị mma, usoro ọrụ niile a na-arụ bụ nke ndị ọrụ anyị zụrụ azụ ma na-enyocha nke ọma site na ndị nlekọta nwere ahụmịhe. Anyị nwere nyocha QC mgbe ọkwa ọ bụla nke mmepụta, gbakwunyere nyocha ikpeazụ nke QC tupu nkwakọ ngwaahịa.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa na ọrụ anyị, biko egbula ịkpọtụrụ anyị, jiri obi gị na-ekele gị!